မက်ဖော်မင်သောက်ပြီး လေပွခြင်း – Healthy Life Journal
မေး. ဆီးချိုဖြစ်တာ ၄နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ meformin 500mg ကို တနေ့နှစ်ကြိမ်လောက် သောက်ပါတယ်။ အခု ဆီးချိုက ၂၅၀-၃၀၀လောက်ရှိပါတယ်။ အခုတလော လေပွပြီး အစားမစားချင်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဆရာဝန်ကိုပြကြည့်တော့ metformin သောက်တာကြာလို့ လေပွတဲ့ပြဿနာဖြစ်တာပါလို့ပြောပါတယ်။ ဆီးချိုသွေးချိုဆရာဝန်ကြီးပြောသလို metformin သောက်တာကြာရင် အဲ့လိုဖြစ်တတ်ပါသလား။ နောက်ဆက်တွဲဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာ သိချင်လို့ပါရှင့်။
Yin Yin Htay(FB)
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။
ဖြေ. မက်ဖော်မင်ရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးထဲမှာ မအီမသာ လေပွ၊ အစာမကြေဖြစ်တတ်တာတော့ ပါပါတယ်။ တချို့တွေလည်း မက်ဖော်မင်သောက်ပြီး မကြာခင်မှာ ဒီဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ဖြစ်တတ်တယ်၊ တချို့တွေမှာ ဆေးသောက်ပြီး ကြာမှ ဖြစ်တတ်တယ်။ အခုစားသောက်တဲ့ အစာထဲမှာ အချိုလုံးဝမပါဘဲ မက်ဖော်မင် တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်သောက်ရင်း ၂၅၀-၃၀၀ ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ကိုယ်ပြသနေတဲ့ ဆီးချိုအထူးကုဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီး ဆီးချိုဆေးတွေကို ချိန်ဆဖို့ လိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မက်ဖော်မင်သောက်နေသူတွေမှာ ဆီးချိုရောဂါကြောင့် ကျောက်ကပ်အားနည်းနေရင်တော့ အစာမကြေ၊ ရင်ပြည့်၊ ပျို့အန်တာတွေ ပိုဖြစ်တတ်တဲ့အတွက် ကျောက်ကပ်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို စစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်။
မက်ဖော်မင်ကြောင့် ကျောက်ကပ်ထိခိုက်မှုမရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျောက်ကပ်ထိခိုက်ရင်တော့ မက်ဖော်မင်ရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ပိုများလာတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျောက်ကပ်ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ ကျောက်ကပ်ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ ကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ ဆေးရဲ့နောက်ဆက်တွဲ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆရင် ကျန်တဲ့ ဆီးချိုဆေးအုပ်စုအမျိုးအစားတွေကို မှီဝဲဖို့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ အချိုကိုတော့ အဓိက ရှောင်သင့်ပါတယ်။
Related Items:Bloating, Metformin
မက်ဖော်မင် မနက်တစ်လုံး၊ ညနေတစ်လုံး (၂)
မကြာခဏ လေပွတတ်သူတို့ နေ့စဉ်လိုက်နာသင့်သည့် နည်းလမ်းကောင်းများ